Ny hatsikana hatsikana amin'ny vehivavy
Tsy misy tsiambaratelo fa ny ankizivavy rehetra dia te-hijery mandrakariva hoe mahavariana, mahafinaritra ary mazava ho azy, tsy azo henoina! Ary na dia ao anatin'ny fotoana mangatsiaka indrindra amin'ny taona aza, na inona na inona ny fafana amin'ny toetrandro, te-hanintona ny lahy sy ny vavy amin'ny lafiny tsara aho. Ny fitandremana ny vehivavy rehetra lamaody amin'ity taona ity dia tokony hisarika ny satroka vehivavy amin'ny cashmere. Ity fitaovana maoderina ity dia tsy manome afa-tsy ny hafanana eo amin'ny lohanao, fa mameno tsara koa ny sary rehetra.
Ny tombony goavana amin'ny kapoaky ny cashmere dia ny fahazavana dia maivana, malefaka, hafanana ary plastika, ary izany dia mamela ny mpanamboatra hamoaka ny fantany ary hamantatra ny hevitra noforonina. Ohatra, mety ho modely monochrome amin'ny feon-javatra rehetra na zava-bita azo akora amin'ny endrika samihafa.
Ireo tia ny fiainam-pianakaviana mavitrika dia ho tia ny hatsikana hatsikana amin'ny kapaoty. Fa ny natiora kokoa dia tokony handinika tsara ny vokatra vita amin'ny lamba iray. Elegant beret miaraka amin'ny tsipìka dia mifanaraka tanteraka amin'ny endriny malefaka sy amam-pitiavana , manome fahatsapana fahamatorana sy hafanana.
Zava-dehibe toy izany koa fa ny biby dia tsy ilaina amin'ny famokarana vokatra. Ny cashmere dia vita avy amin'ny alàlan'ny osy iray mirehitra izay mipoitra amin'ny ririnina, ary amin'ny lohataona, rehefa manomboka mandatsaka izy, ny plastika dia naingaina na kobonina.
Katsahin'ny hatsikana avy any Italia
Ny vehivavy rehetra amin'ny lamaody dia mahalala tsara fa ny Frantsay sy ny Italiana hatramin'izao dia mifaninana amin'ny raharaha rehetra, indrindra raha ny momba ny lamaody sy ny fomba. Ary, na dia nentina tany Italie avy any Frantsa aza io volonondry io, dia italiana kasemana io no fenitra takatry ny kalitao, ny style ary ny luxury. Ny vokatra tsara mandritra ny am-polo taona dia malaza manerana izao tontolo izao ary mitaky be loatra.
Kapoaka mafana, kodiarana
Sunglasses ho an'ny vehivavy
Volon'aretina volombava ho an'ny volo
Fiarovan'ny hoditra fanenitra
Pashmina, izay toy ny fehiloha
Ahoana ny fisafidianana elo?
Pandora brôzôterina - ny lanjan'ny fananganana
Fetsy kofehy vita amin'ny pom-pom
Ahoana ny famerenana ny volo rehefa manazava?
Metsikao avy amin'ny "Marshmelow"
Ahoana no hankalaza ny faha-18 taonan'ny lehilahy?
Inona no tokony hataon'ny mpamono olona?
Ahoana no handoavana ny Eco Slim amin'ny fatiantoka?
Cristiano Ronaldo dia fialan-tsasatra any Ibiza miaraka amin'i Georgina Rodriguez, reny sy ankizy
Ahoana ny fomba hampiasana dite mofomamy?
Hydrocortisone - menaka
Gwen Stefani sy Blake Shelton nametraka ny sarin'ny zanany tsirairay tao amin'ny Twitter
Fanaovana tolona - fomba fiady
Rahoviana ny hamboly voaloboka eo amin'ny zana-ketsa?
Clay miaraka amin'ny mayonnaise
Fambolena zavamaniry any anaty trano
Lehilahy manetry fitiavana
Hevitra ho an'ny loggia